'जीवन संघर्ष' पुस्तक विमोचन
काठमाडौं, २१ चैत – कुमार कार्कीले लेखेको नेपाली पुस्तक जीवन संघर्ष बुधवार काठमाडौंमा विमोचन गरिएको छ । एक समारोहमा संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, नायक राजेश हमाल, वरिष्ठ सञ्चारविज्ञ रामकृष्ण रेग्मी लगायतले पुस्तक विमोचन गर्दै त्यसमाथि आफ्नो धारणा पनि राखेका थिए ।
जीवन संघर्ष पुस्तक कुमार कार्कीको जीवन र अनुभवमा आधारित पुस्तक हो । यस पुस्तकमा बर्मा, थाईल्याण्ड र नेपालको कथा समावेश छ । बर्मामा नेपालीहरूको प्रवेश कसरी भयो ? उनीहरूले कसरी बर्मामा बसाइँ सरे ? कसरी उनीहरूको जीविकोपार्जन सुरु भयो ? उनीहरूले नेपाली भेष, भाषा र संस्कृतिको सयौँ वर्षसम्म कसरी जगेर्णा गरे ? नेपाल र नेपाली समाजप्रति उनीहरूको किन धेरै स्नेह र ममता भयो ? कहिल्यै नेपाल नआउने नेपाली मूलका बर्मेलीहरूले कसरी भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गरिरहे ? जस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूको उत्तर यस पुस्तकमा पाउन सकिन्छ । बर्मामा हाल करिब तीन लाख नेपाली मूलका मानिसहरू बसोबास गर्छन् ।
तर बर्माबाट अन्य ठाउँ सर्दै गएका नेपालीहरूको सङ्ख्या बढिरहेकोले यो सङ्ख्या हाल केही घटेको अनुमान गरिन्छ । थाईल्याण्डमा पनि एक लाख भन्दा बढी नेपाली मूलका मानिसहरू बसोबास गरिरहेका छन् ।
बर्मा र थाईल्याण्डमा रहेका नेपाली मूलका मानिसहरूले नेपाललाई पितृभूमिको रूपमा मान्दछन् । जीवन संघर्ष पुस्तकमा पनि उहाँले जन्मभूमि बर्मा, कर्मभूमि थाईल्याड र नेपाललाई पितृभूमिको रूपमा उल्लेख गर्नु भएको छ । सारांशमा यो पुस्तक कुमार कार्कीको कथा मात्र हैन, हजारौं नेपाली मूलका मानिसहरूको कथा हो । यसले दुबै देशमा रहँदै आएका नेपाली मूलका मानिसहरूको कथा, संवेदना, खुशी र देशप्रेमको कथालाई बोक्दछ । नेपालका लागि अनागरिक भए पनि बर्मा र थाईल्याण्डका नेपालीहरूले नेपाली समाजलाई एकदमै नजिकैबाट नियालिरहेको तथ्य यस पुस्तकमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।